Ukuphupha ngencoko Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iipiper zezinye zezona ntlobo zityebileyo zeentlobo zeenyoka, ezenza ngaphezulu kweepesenti ezingamashumi amahlanu zazo zonke iinyoka eziphilayo. Xa kuthelekiswa neenyoka, inyoka ayinayo inkqubo yetyhefu ebhengeziweyo, ngenxa yoko ayinabungozi ebantwini.
Kodwa xa inyoka ingena kwilizwe lethu lamaphupha, ngokuqinisekileyo inokubangela iphupha elingenakuphumla. Yintoni kanye kanye ebangele olu phawu lwamaphupha kwaye amaphupha alo anokulitolika njani?
1 Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolikwa ngokubanzi
Inyoka efumana kuyo iphupha el mundo amaphupha anokuba luphawu lwesilumkiso kuye. Isenokuba ngenxa yeemeko ezingathandekiyo okanye ukungaqondani ukwaphuka yiza kubudlelwane bothando. Ke lumka kwaye uqaphele kwangoko kwiimpawu ezinokuthi zibeke ithamsanqa lakho emngciphekweni.
Kwakhona, "isongezo" isimboli yamaphupha icebisa ngokubanzi ngaphezulu Atención xa usebenza nabanye abantu, kuba inyoka ihlala iluphawu lobuxoki nokungcatsha. Ke ngoko, ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, kuyacetyiswa ukuba wazi abantu ngcono kuqala. Nokuba wenza uluvo lokuqala oluhle, isimilo sokwenene somntu sihlala sibonakala emva kwethuba. Cinga ke ngononophelo ngomntu omthembileyo!
Ukubulala inyoka ephupheni kuba yenye yamaphupha kubomi bokwenyani. Uloyiso ncedisana nembangi. Uloyiso lwenyoka luthembisa abo bachaphazelekileyo ukubanakho nokuphindaphinda ukujongana nabantu abanobutshaba. Idiploma kunye nokubona kwangaphambili kuyakuvumela ukuba ushiye intsimi njengempumelelo.
Imeko edla ngokubakho ephupheni kukulunywa yinyoka. Olu luhlu lwamaphupha kufuneka luqondwe njengesilumkiso. Qiniseka ukuba uyaziphepha iimpikiswano kwaye ungaphazamisi kwimicimbi yabanye abantu. Hlala ungathathi cala. Nokuba bacela uncedo lwakho, sukungena kwingxabano. Ukuba uyayenza, iya konakaliswa kamva.
Ukuba ubona iinyoka ezimbini kwilizwe lamaphupha, kuya kufuneka ujongane nomlo ophindwe kabini. Nangona kunjalo, inokuba ngabantu ababini abakhomba kweli phupha.
Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolikwa kwengqondo
"Inyoka" kumfanekiso wephupha, njengenyoka uqobo, ekutolikeni kwephupha uphawu lwesimboli isini. Inyoka ebhijelweyo, umzekelo, iyahambelana namandla esondo angasetyenziswanga.
Ukuba inyoka iyalityhutyha iphupha kwaye ithathe umphefumlo wakho kwinkqubo, iziva ithintelwe kwaye ichithwe ngumntu okanye imeko nokuba kuvukile ubomi. Ingaba yintsebenziswano yesondo. Xa esi sibini sibeka iminqweno yesini okanye okulindelweyo kwephupha, elingafuni kulifeza okanye elingenako ukukufeza ngezizathu zeentloni.
Iphupha lenyoka lingabonisa uloyiko lomncintiswano kwiphupha labasetyhini. Ngamanye amaxesha iphupha elinjalo likwanika umkhondo wokuba umntu obhinqileyo kwindawo yamaphupha udlala umdlalo ongalunganga okanye azame nokuba kwiqabane lakhe. Kule meko, isongezo sithetha Ubuqhetseba neempembelelo ezimbi.
Isimboli yephupha «isongezo» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "inyoka" uqulethe kwinqanaba lokutolika kwamaphupha okomoya. Amandla ezesondo. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kumxholo wephupha, inyoka isilumkisa ngobubi kunye neminqweno eyonakalisayo.